मतपेटिका जोगाउन मूसालार्इ पासो – Halkaro
मतपेटिका जोगाउन मूसालार्इ पासो
प्रकाशित मिति : २०७४, १९ मंसिर मंगलवार
काठमाडौँ । सदरमुकाममा राखिएका मतपेटिका जोगाउन मुसालाई पासो थापिएको छ । पहिलो चरणमा चुनाव भएका जिल्लाका मतपेटिका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कडा सुरक्षाबीच राखिएको छ । मतपेटिका मुसाले काट्ने चिन्ता बढेको छ ।
← सबैको चासो कस्तो होला सरकार ?
कहाँ चुक्यो सुरक्षा संयन्त्र, किन हुँदै छ लगातार विष्पोट ? →